गाउँ, विकास र आधुनिकता - Samadhan News
गाउँ, विकास र आधुनिकता
समाधान संवाददाता २०७८ जेठ १८ गते १४:५१
जतिजति विकासको  बे ग बढ्छ,  र ै थाने  मानिस भने  उतिउति विस् थापित हुँदै  छन् । ‘विकास स् थानीय मानिसलाई  झन् किनार ामा धके ल्दै  लै जाने  मो डल हो ,  मानवशास् त्री डे से न भन्छिन्,  ‘यस् तो  विकास जनताका लागि हो इन,  यो  त पुँजीपतिहरूका लागि हो  । यस् तो  विकासले  गाउँका थो र ै  मान्छे लाई  धनी बनाएर  धे र ै  मानिसलाई  गरि ब बनाउँछ’ बे लायती विकास विज्ञ डा. र ो वर्ट  चे म्वर ले  भन्छन् । झट्ट हे र्दा  अहिले  गाउँमा के  छै न,  सबथो क छ । प्राविधिक शिक्षालय छ,  बिजुली छ,  फर ाकिलो  बाटो  छ,  घर घर मा खाने पानीको  धार ा छ,  एक–दुई  दर्ज न पक्की घर हरू छन् । तर  अहिले  गाउँमा युवाहरू छै नन् । उनीहरू चाहे र  पनि गाउँ फर्कि न सक्दै नन् । उहिल्यै  पै सा बो के र ,  चामल बो के र ,  साडी र  रि चार्ज  कार्ड  तथा चुनाव चिह्न बो के र ,  अहिले  ‘विकास’ बो के र  गाउँ पसे काहरूकै  र जगज छ । उनीहरूकै  सन्तान पढिर हे का छन् र ाजधानी र  बिदे शमा । उनीहरूकै  सन्तान पुगे का छन् अड्डादे खि अदालतसम्म । झाडी फाँड्ने को  सन्तान जहाँको  तहीँ ।
विश्व बै ंकका एक विख्यात अर्थ शास् त्रीले  ले खक समीर  गुप्ता र  र े  किलीको  पुस् तक ग्लो वलाई जे सन एण्ड आफ्टर मा भने का छन्,  ‘विश्वका एक प्रतिशत धनीहरुले  ५७ प्रतिशत गरि बको  वर ावर  आम्दानी गर्छ न,  विश्वका ५ प्रतिशत गरि बहरु वार्षि क २५ प्रतिशतले  आफ्नो  आम्दानी गुमाएर  झन गरि ब बन्दै छन् भने  २० प्रतिशत धनीहरुको  आम्दानी वार्षि क १२ प्रतिशतले  बढे को  छ । मै ले  यो  तथ्य किन पनि र ाखे को  भन्दा विश्वमा असमानता बढे को  छ,  सत्य हो ,  तर  दे श दे शका बिचको  मात्रै  हो ई न व्यक्ति व्यक्तिका बिचमा पनि असमानता ह्वात्तै  बढे को  छ भन्न खो जे को  हो  । अझै  गाँउले हरु किन र  कसर ी झन झन गरि ब भइर हे का छन् र  धनी गरि वबीचको  खाडल झन किन बढे को  छ भन्ने  प्रश्नको  जवाफ खो ज्ने  प्रयत्न यस आले खमा गर े को  छु ।
आधुनिकता बन्ने  हो डमा गाँउमा भएका मुख्य मुख्य परि वर्त नलाई  के लाउने  हो  भने  हाम्रो  गाउँ खत्तम नै  भइसके को  हो  कि भन्ने  प्रतीत हुन्छ । विकास वा समृ द्धिका नाउमा भएका सर कार ी,  गै र सर कार ी प्रयास र  त्यसका सकर ात्मक तथा नकर ात्मक दुवै  पाटो  खो तल्ने  हो  भने  हाम्रो  अहिले को  यथार्थ ता आई हाल्छ । ने पालमा यो  विकास र  आधुनिकता भन्ने  दुवै  पश्चिमा संस् कृ तिबाट आएको  हो  । यो  विकास वा समृ द्धि वा आधुनिक जे  भने पनि यसलाई  ‘सभ्य र  उत्तम वा सर्व श्रे ष्ठ’ सम्यता झल्काउने  अस् त्रका रुपमा प्रयो ग गर े को  पाई एको  छ ।
विकास वा समृ द्धि भने को  आधुनिकताको  परि णाम हो  भन्ने  गरि एको  छ । अर्था त प्रचलित प्रथा पर म्पर ाको  ठिक उल्टो  हुनु नै  अहिले को  सन्र्द भमा समृ द्धि वा आधुनिकता हो  । आधुनिकता त्यतिखे र  महसुस हुन्छ,  जतिखे र  पर म्पर ाहरु ध्वस् त हुन्छन् । हामी ने पाली आज पनि दे शको  विकास हुनु भने को  पश्चिमा झै  ठूलाठूला सडक,  कलकार खाना र  शहर हरुको  विस् तार लाई  निर न्तर ता दिने  बुझे का छौ ं । समाज विकास भने को  चाँही उनीहरुको  जस् तै  व्यक्तिवादी संस् कृ ति र  पद्धतिलाई  अपनाउने  हो ,  जुन हाम्रो  आम ने पाली संस् कार  र  संस् कृ तिको  ठिक विपरि त अभ्यास हो  । शहर ीकर ण,  औ धो गिकीकर ण र  आधुनिकीकर ण नै  विकास भन्ने  गरि एको  छ । ‘शहर का लागि सडक’ वा सवै को  लागि सडक चाहिन्छ । अहिले  यस् तै  छ । के  त्यसो  भए सडक नै  नभएको  ठाउँमा आधुनिकता नै  हुँदै न त ? यही मानसिकताले  हामी ने पालीलाई  गाँजे को  छ र  त सडक खन्ने  हो ड चले को  छ । मै ले  सडकले  गाउँले  जीवन सहज हो ई न थप जटिल र  अप्ठे र ो  वनाई दिएको  अनुभूति गर े को  छु । सडकले  आधुनिकता ल्याउछ भन्ने  चकोर्   अन्धविश्वासले  आम गाउँले मा जर ा गाडे को  छ । मे र ो  गाउँ पो खर ा महानगर पालिका २३,  हर्प न हो  । यो  वडा महानगर को  ग्रामीण वडा पनि हो  । हल्लनचो कदे खि १५ किलो मिटर  पश्चिम फे वातालको  मुहान यो  गाँउमा २०६० को  दशमा मो टर  बाटो  पुग्यो  । मे र ो  पुर्खा हरुसँगै  म आफै  पो खर ा आउनको  लागि पामे सम्म हिडे र ै  आउथे  अनि फे वातालमा ढुंगा चढे र ै  करि ब २ घण्टामा पो खर ा आई सकिन्थ्यो  । विहानै  घर बाट खाना खाएर  हिडे का हामी पो खर ा आएर  काम सके र  बे लै  माथि घर  पुगिन्थ्यो  । घर को  काम पनि गरि न्थ्यो  तर  अहिले  मे र ो  गाउँमा दै निक बिहान ७ बजे  पो खर ाका लागि वस छुटछ,  भने  अपर ान्ह ४ः०० बजे  मात्रै  पो खर ाबाट छुटे को  वस साढे  ५ बजे  गाउँ पुग्छ । स् थानीयलाई  थप र कमको  जो गाढ गर्नु पर े को  छ । वसको  महँगो  भाडा त छँदै छ थप खाजा खानाको  र कम र  समय पनि वर्वा द गर्नु पर े को  तितो सत्य छ । विहान ७ बजे  हिडे को  मान्छे  वे लुका ६ बजे  घर  पुग्छ,  पहिले  ५ घण्टामा सवै  भई सक्ने  काम अहिले  ११ घण्टा लाग्छ । अचे ल मो टर बाटो ले  गाँउमा उत्पादन वढाएको  नभई  विदे श जाने  पासपो र्ट  बनाउन सदर मुकाम आउने  माध्यम मात्रै  वने को  छ । विना सभेर्   खनिएका मो टर वाटो ले  धे र ै  नागरि कको  अकालमा ज्यान लिएको  पनि छ । अचे ल गाउँका मानिसको  बानी झन नर ाम्रो सँग विग्रे को  छ,  थो र ै  वाटो  पनि नहिड्ने  र  मो टर  नै  कुनेर्   भएको  छ । अहिले को  मूल समस् या भने को  चाँही के  हो  भने ,  ‘हिडनुलाई  गरि बी र  पछौ टे पन तथा मो टर  चढनुलाई  आधुनिकतासँग दाँज्ने  गरि एको  छ । अझै  यहाँ त ‘कन्जुस र  असभ्य’ समे त मान्न थालियो  हिड्ने  मानिसलाई  ।
म त गाउँमा जन्मे  हुकेर्  को  र  जीवन चलाउनमा शहर मा संघर्ष  गदैर्   गर े को  तन्ने र ी हो  । मे र ो  लागि अहिले  पनि गाउँ नै  प्रिय लाग्छ । त्यसै ले  यसै पाली गाउँको  मे े र ो  घर लाई  मर्म त संभार  गर ी करि व ५० वर्ष को  लागि आनन्दले  बस् न मिल्ने  बनाएको  छु । हामीले  गाउँमा खाजा खाना खाने  भने को  मकै ,  को दो ,  फापर  र  चामलको  दालभात,  ढिडो ,  पिठो का परि कार ,  चिउर ा तथा भटट्मास,  दुध,  दही मो ही हुन्थ्यो  । यी खाना धनीमानी सवै को  साँझा खाना बन्थ्यो  । यद्यपि गरि बहरु को दो को  ढिलो  र  खो ले  मात्रै  खान्थे  भने  धनीहरु ढिडो सँग भात खान्थे  । सबै  नागरि क स् थानीय उत्पान नै  खान्थे ,  स् वस् थकर  खाना खान्थे  तर  अचले  त्यस् तो  छै न्,  भात अर्था त ‘चामल संस् कार ’ हावी भएको  छ । अहिले  चाउमिन,  मःम,  समो सा,  पिज्जा,  वर्ग र ,  चाउचाउ,  लगायतको  खाजा संस् कार  वने को  छ । जुन हाम्रो  स् वास् थ्यको  दृ ष्टिको णले  कुनै पनि हालतमा ठिक मान्न नसकिने  स् वास् थ्य विज्ञहरुको  ठहर  छ । चामलबाट वने को  परि कार  खाने  मानिसहरु वढि बिर ामी हुने  गर े को  अध्यन र  अनुसन्धानले  पनि दे खाएको  छ । आजकाल दही मो हीको  सटट को काको ला,  कफि,  चिया र  आई सक्रिम प्रयो ग गर्न  थालिएको  पाई न्छ,  यो  पनि स् वास् थ्यकर  जीवनको  लागि र ाम्रो  हो इन । यही हो  आधुनिकताले  हाम्रो  जनजीवनमा पार े को  नकर ात्मक असर  ।
हामी स् थानीय फलफूल के र ा,  वे लाउती,  आँप,  आरु,  काफल,  चुत्रो ,  भुत्रो ,  अमला,  ऐ सलु वा अँगे र ी खाई न्थ्यो ,  तर  अचे ल स् याउ,  अनार ,  सुन्तला,  कटहर ,  मौ समी लगायतका फलफूल र  तिनबाट वने को  महंगो  जुस प्रयो ग चलन बढे को  छ । जो सँग सामान्य गरि बको  पहुँच नै  नपुगे को  पाएको  छु । यी सवै  गरि बको  वस भन्दा धे र ै  वाहिर को  चीजवस् तु हो  । वडो  अचम्म लाग्छ,  हाम्रो  गाउँले हरु त्यही माथि किसानहरुले  नै  चाडवाडमा छो र ाछार ीलाई  आर्शि वाद दिदाँ एउटा असल किसान भएस भन्दै नन्,  र  भन्छन ‘ठूलो  डाक्टर ,  ई न्जिनियर ,  पाई लट भएस’,  जुन पढाई  त्यही गरि ब किसानको  पहुँच भन्दा कयौ ं गुना ढाटा छ । हाम्रा गो विन्द के सी डाक्टर  साप यिनै  गरि बका छो र ाछो र ीलाई  सहज मे डिकल शिक्षा पढाउने  लडाई ँ लड्दा लड्दै  कपाल फुलाए । मै ले  जो डन खो जे को  कुर ा के  हो  भने  कतै  हामीले  आधुनिकता र  समृ द्धिका नाममा कतै  हाम्रो  मौ लिकता भत्काउने  र  अर्का को  दे खासिकी गनेर्   गलत कार्य  बढे को  पाएको  छु । हाम्रो  अकोर्   मूल समस् या भने को  अव्यवस् िथत वसाई सर ाँई  पनि हो  । हाम्रो  चलन समथर  र  मै दानी ठाँउमा वसाई  सनेर्   र ो ग बढे को  छ,  भने  त्यही शहर ीकर ण गनेर्   चलन फस् टाएको  छ । समथर  जमिन दे ख्नै  नहुने  हाम्रा जग्गा दलालहरु प्लटिङ गर्दि हाल्छन् । जसले  हाम्रो  उत्पादनको  मुख्य क्षे त्र घडे र ी र  घर मा परि णत भएको  छ,  अनि अनाज कहाँ फलाउने  त ? पो खर ाकै  हे र्न  सकिन्छ,  बिर ौ टा,  कुँडहर ,  माले पाटनको  अहिले को  हालत के  छ ? अनि महानगर का ने ताहरु लाजै  नमानी भन्छन् व्यवस् िथत पो खर ा बनाउँछु,  उनीहरुले  जथाभावी वस् ती वसाल्न र  प्राकृ तिक सम्पदा मिच्न उत्प्रे रि त गनेर्   कार्य  गर े को  घाम जस् तै  छर्ल गं छ ।
गाउँमा मै ले  अकोर्   पनि समस् या दे खे  । पहिले  कामसँग अन्न हुन्थ्यो  तर  अचे ल कामसँग दाम हुन थाले को  छ । यसले  के  गर े को  पाए भने ,  काम गर े वापत अन्न लिन महिला जान्थे ,  घर का सवै को  खाना बन्थ्यो  । तर  काम गर ी पै सा ल्याउने  पुरुषले  घर  फर्क दा कमाएको  पै साले  र क्सी पिएर  फर्क दा घर मा अन्नपातको  समस् या बढे को  गुनासो  महिलाहरुको  सुने को  छु । यो  त मे र ो  विचार मा ठिक भएन । आधुनिकताले  ल्याएको  विकृ त रुप हो  । पहिले  पहिले  मतवालीहरुले  मात्रै  र क्सी पिउथे  अचे ल तागाधार ी पनि पिउन थाले  । स् थानीय को दो  लगायतका अनाज र क्सी वनाउन प्रयो ग बढी भयो  जसले  खाद्यन्न अभाव दे खिएको  छ । पहिले  पहिले  जात जातीमा मात्रै  उचनिच भन्ने  थियो  अहिले  खानपान,  उठवस,  र हनसहन सबै  उचनिच हे र्न  आधार  वनाई एको  छ,  यो  आधुनिकताका नाममा ल्याइएको  खर ाव चीज नै  हो  ।
वास् तवमा गाउँमा त सबै  चीज महंगो  छ,  जहाँ क्रयशक्ती अन्यन्त कमजो र  छ,  त्यही महंगी छ,  यातायात भाडा,  टे लिफो न महसुल,  इन्टर ने ट,  बिजुली महसुल,  स् वास् थ्य,  शिक्षा सबै  शहर को  भन्दा महंगो  छ । यो  सबै  आधुनिकताले  ल्याएको  असर  नै  हो  । मै ले  के ही वर्ष  पहिले को  एउटा तथ्यांक हे र े को  थिए ने पाल र ाष्ट्र बै ंकको  जसमा भनिएको  थियो ,  कि ६८.७८ प्रतिशत खानपानमा खर्च  गनेर्   ने पालीको  बानी अहिले  ३८.९० प्रतिशतमा झर े को  छ,  यो  स् वास् थ्य जीवनको  लागि र ाम्रो  संके त हो ई न । हाम्रो  खानपान र  आहार  व्यहार  परि वर्त नले  जनस् वास् थ्यमा पनि असर  गर े को  विज्ञहरुको  भनाई  आउन थाले को  छ । त्यसै ले  अव हाम्रो  यो जनाकार हरुतर्फ  फर्क न चाहे ,  उनीहरुले  यो जना बनाउँदा स् थानीय माग,  आवश्यकता,  र ै थाने  ज्ञान,  सिप तथा ने पालीपन जो गाउने  गर ी पूर्वा धार  विकास लगायतका सामाजिक र  सांस् कृ तिक कार्य क्रम ल्याउन आग्रह छ । जसले  मात्रै  हाम्रो  गाउँ बचाउँछ,  गाउँलाई  बचाउनु भने को  ने पाललाई  आफ्नै  शै लीमा बचाउनु हो  ।